မစ်ဆူရီ WIC | JPMA, Inc
မင်ဆူရီ WIC အစီအစဉ်နှင့်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုပါ။ 573-751-6204 or (အခမဲ့) 800-392-8209။ မစ်ဆူရီ WIC ကိုလည်းဤနေရာတွင်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည် - WICinfo@health.mo.gov.
သင်၏ WIC အစားအစာများကိုသင် ၀ ယ်ယူပုံသည် Missouri eWIC ကဒ်အသစ်ဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကဒ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်ဤဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ။
မှတ်ပုံတင်တွင်သင်၏ eWIC ကဒ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
ရှာရန်မစ်ဆူရီ WIC တရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်"နိမိတ်။
သင်၏ WIC ဒေသဆိုင်ရာအေဂျင်စီမှပေးသောစျေးဝယ်စာရင်းကိုပြန်ကြည့်ပါသို့မဟုတ်သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်ချိန်ခွင်လျှာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်စတိုးဆိုင်ကိုမေးမြန်းပါ။
စျေးဝယ်စာရင်းသည် eWIC ကဒ်တွင်ရှိသည့်အိမ်ထောင်စု၏စားနပ်ရိက္ခာခံစားခွင့်အားလုံးကိုမှတ်သားဖော်ပြလိမ့်မည်။
* (၇) မမှန်ကန်သော PIN ကြိုးပမ်းမှုအပြီးတွင်သင်၏ eWIC ကဒ်ကိုသော့ခတ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကဒ်ကိုသော့ဖွင့်ရန်သင်၏ WIC ဒေသခံအေဂျင်စီသို့သွားရောက်ပါ။
Allowed - ဤပစ္စည်းကို Missouri WIC အတွက်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ သိထားသင့်သည့်အချက်တစ်ခုမှာသင်သည်ပစ္စည်းတစ်ခုခွင့်ပြုသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကို WIC နှင့်မဝယ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နှစ်သားလေးသည်နို့တစ်လုံးရရှိသည်။ သင့်မိသားစုတွင်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမရှိပါကနို့တစ်လုံးလုံးသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သင်မှတ်ပုံတင်တွင်နို့တစ်လုံးလုံးမဝယ်နိုင်ပါ။ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များသည် WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ချိတ်ဆက်သည်အထိဤ“ ခွင့်ပြုထားသော” မက်ဆေ့ခ်ျသည်သင့်မိသားစုအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
မ WIC ကို item - ဆိုလိုသည်မှာ Missouri WIC သည်ဤအရာကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ။ အကယ်၍ WIC အစားအစာသက်သာခွင့်များဖြင့်ဤအစားအစာကိုသင် ၀ ယ်ယူသင့်သည်ဟုသင်ထင်မြင်ပါက“ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!ဒီ app ထဲမှာ "ခလုတ်ကို။
English Missouri WIC အစားအစာစာရင်း
ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်အဆင့်မြင့် ၀ န်ဆောင်မှု ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွင်းရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးရောဂါသို့မဟုတ်ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်များကို WIC အာဟာရနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအားပိုမိုနားလည်စေရန်ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ သုံးစွဲသူများသည်ဤဆိုက်တွင်တွေ့ခဲ့ဖူးသောအရာတစ်ခုခုကြောင့်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေခြင်းကိုနှောင့်နှေးခြင်းမပြုရပါ။ အာဟာရပညာရှင်များ၊ ဆေးသမားများနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်ဤ site ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားအရင်းအမြစ်များနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ မည်သည့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဤဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်ကိုမစ်ဆူရီကျန်းမာရေးဌာနနှင့်အကြီးတန်း ၀ န်ဆောင်မှုများမှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောထောက်ခံချက်အဖြစ်မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ထို့အပြင်ဌာနသည် ၄ ​​င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အခြားဆိုဒ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဌာနအားတာဝန်မယူနိုင်ပါ။ ဤဆိုဒ်များတွင်မကျေမနပ်ဖြစ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းအသိပေးအကြောင်းကြားပါမည် အီးမေးလ်က.
မစ်ဆူရီကျန်းမာရေးဌာနနှင့်အကြီးတန်းဝန်ဆောင်မှုများ (MDHSS) ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းပုံစံတိုင်ကြားချက်